बैशाख ३०, काठमाडौं । साहस ऊर्जा कम्पनीले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको एक करोड पाँच लाख कित्ता आइपीओ निकाल्ने भएको हो । गत चैतमा कम्पनीले आइपओ निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । आइपीओ निष्काशन अनुमतिका लागि प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाउना साथ आइपीओ निष्कासन गर्ने जनाएको छ । उक्त कम्पनीले संङखुवासभामा ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करिब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अनुसार आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट साढे १३ करोड…
May 11, 2021 May 11, 2021 Nepal E News
बैशाख २८, काठमाण्डौ । सिईडिबि हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओमा ११ गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलमा अनुसार १७ लाख ३६ हजार ७०० आवेदनबाट २ करोड ६३ लाख ४५ हजार ५०० कित्ता शेयर माग भएको हो । यो सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ताको ११.२४ गुणा बढी हो ।कम्पनीको शेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार न्युनतम १० कित्ता दरले शेयर वितरण हुनेछ । त्यस अनुसार २ लाख ३४ हजार १९५ जनाले मात्रै न्युनतम…
बैशाख २६, काठमाण्डौ । एन आई सी एशिया बैंकले बचतसँगै बीमा सुविधाले भरिपूर्ण चमत्कारिक बचत सिरिज अन्तर्गत उपलब्ध रू. २० लाख बिमा रकम जनही रू. १० लाखका दरले दुई जना ग्राहक महानुभावहरूलाई भुक्तानी गरेको छ । सियारी गाउँपालिकाको हर्नैया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत बुटवल निवासी ४४ वर्षिया श्री निशा श्रेष्ठ आले कक्षपतिज्यूले यस बैंकको रुपन्देही जिल्लास्थित सियारी शाखामा सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता खोल्नुभएकोमा सो खातामा रहेको खातावाल तथा निजको परिवारका सदस्यहरुलाई समेत उपलब्ध बीमा सुविधा अनुरुप वहाँका पति श्री जवीन प्रसाद कक्षपतिज्यूको घातक रोग उपचारवापत निज खातावालाले उक्त रकम प्राप्त…
तीन लघुवित्तले आईपीओ छिट्टै निष्कासन गर्दै, कसको कति ? [बिस्तृतमा]
वार्सिलोना। डेनमार्कमा उनको बसाइ भएपनि युरोपभर परिचित नाम हो सन्त कुमार थापा मगर। युरोपका देशहरुमा पुगेर उनले नृत्य नगरेको सायदै होला। श्रीमती मलिका प्रधानसँगै युगल नृत्य युरोपको नेपाली समुदायले असाध्यै रुचाएको जोडी हो । तर, ४१ वर्षको उमेरमा नै उनै सन्त कुमार सधैँका लागि अस्ताएका छन्। बैशाख २६, काठमाडौं । आईपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा तीन लघुवित्त संस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन् । जाल्पा सामादायिक लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका हुन् । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था मनकामना स्मार्ट लघुवितत्त वित्तीय संस्था…
यो साताको शेयर बजार : कति अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक ? हेर्नुहोस् कारोबार रकमको अबस्था के छ ?
बैशाख २५, काठमाण्डौ । यो हप्ता नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ०२ अंकले बढेर २६ सय ३७ दशमलव १३ विन्दुमा रोकिएको छ । गत साता नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव ८८ अंकले घटेर २६ सय ११ दशमलव १० विन्दुमा रोकिएको थियो । यस साता ५ दिनको बजारमा ३ दिन बजार घटेको थियो भने बाँकी २ दिन नेप्सेले उकालो यात्रा तय गरेको थियो । यस साता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ४ दशमलव ०१ अंकले बढेर ४ सय ७३ दशमलव ०४ विन्दुमा रोकिएको छ । गत साता सेन्सेटिभ परिसूचक ७ दशमलव ५८ अंकले घटेर ४…
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खुद नाफा कति ? बिस्तृत जानकारी
बैशाख २५, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू ५ करोड २७ लाख ५७ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू १ करोड २१ लाख ३० हजार यो नाफा गरेको थियो । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खुद नाफा कति ? बिस्तृत जानकारी २५ बैशाख २०७८, शनिबार १७:०५ NewsRoom बैशाख २५, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू ५ करोड २७ लाख ५७ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू १ करोड २१ लाख ३०…
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ भयो स्थगित : कारण भने यस्तो हेर्नुहोस पुरा जान्कारी
May 7, 2021 May 7, 2021 Nepal E News
बैशाख २४, काठमाडौं । स्थानियमा विक्री खुला भएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ स्थगित भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोनाका कारण सबै स्थानिय सम्बन्धित स्थानमा जान नसकेको भन्दै स्थगीत गरिएको बताईएको छ । कम्पनीले कुल कित्तामध्य आयोजना क्षेत्रका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्थायिनका लागि १८ लाख कित्ता र सोही जिल्लाका अन्य वासिन्दाका लागि ४२ लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको हो ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक सेयर आजबाट हुदै छ बिक्री खुल्ला
May 6, 2021 May 6, 2021 Nepal E News
बैशाख २३, काठमाडौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक समूहको सेयर आजबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेको छ । बैंकले संस्थाको ६२ हजार ३ सय ८८ कित्ता कित्ता संस्थापक समूहको सेयरहरू लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयरको न्युनतम मूल्य ५ सय ७६ रूपैयाँ तोकिएको छ ।
ग्रीन भेन्चरको आइपिओमा कति दिने आवेदन ? सबै जानकारी बिस्तृतमा
बैशाख २३, काठमाण्डौ । ग्रीन भेन्चर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६२ लाख ५० लाख कित्ता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीको आईपीओको बिक्री प्रबन्धकको लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ । यो पनि पढ्नुहोस प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ३ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७=५० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा…